စက်သည်ကျောက်စိမ်းနှင့်လက်ဖြင့်ထွင်းထုထားသောကျောက်စိမ်း - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / စက်ထွင်းထု jadeite vs လက်ထွင်းထု jadeite
စက်ထွင်းထု jadeite vs လက်ထွင်းထု jadeite
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-12-28 မူလ:ဆိုက်ကို
Jadeite ထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်တို့0ယ်သောအခါ Jadeite သည် Jadeite ထုတ်ကုန်များ၏အဆို့ရှင်ကိုအလွန်အတိုင်းအတာအထိရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ထို့ကြောင့် Jadeite ထွင်းထုဖြစ်ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်သင့်တဲ့အရေးကြီးသောအရာဝတ္ထု။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောက်စိမ်း၏ထွင်းထုသည့်နည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းကိုလေ့လာပါမည်အပေြာင်းစက်ထွင်းထုနှင့်လက်ထွင်းထုအကြားကွဲပြားခြားနားမှု။
ပစ္စည်းအပြင်ထိတွေ့ခြင်းအပေါ် မူတည်. ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းကောင်းတစ် ဦး သည်လည်းများစွာမူတည်သည်။ထွင်းထုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လျစ်လျူရှုသင့်သည့်ရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်.ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းတွင်စက်သည်ထွင်းထုခြင်းနှင့်လက်ထွင်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။တချို့လူတွေကတချို့ဟာတချို့ကတချို့ကယဉ်ကျေးမှုကိုထွင်းထုနေတုန်းထွင်းထုထားတဲ့စက်တွေကိုကြိုက်တယ်။ အမျိုးမျိုးသောလူတို့ကိုယ်ပိုင်ရှိသည်ပိုမိုနှစ်ကြိုက်ခြင်း.
ကျောက်စိမ်းထွင်းထုထားသည့်ထွင်းထုခြင်း, ultrasonic ထွင်းထုခြင်းနှင့်ကွန်ပျူတာထွင်းထုထားသည်။ Ultrasonic Carving နည်းလမ်းသည်စက်ကို Jadeite ပစ္စည်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မောင်းထုတ်ရန်စက်ကိုအသုံးပြုရန်နှင့် ultrasonic frequency နှင့်အတူပြန်ပွတ်သပ်စေခြင်းငှါ, ကွန်ပျူတာပန်းပုလက်ရာနှင့် ultrasonic ပန်းပု၏နိယာမသည်အလားတူဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကျောက်စိမ်းထုတ်ကုန်များသည်သက်သာရာရစေသည်။ ဒါဟာ t ကိုသိသာသည်သူကစက်၏အားသာချက်များသစ်သားပန်းပေြာက်အချိန်ချွေတာခြင်း, လုပ်အားပေးခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်.သို့သော်အားနည်းချက်သည်သိသာထင်ရှားသည်မှာထင်ရှားသည်မှာ၎င်းသည်အလွန်ယူနီဖောင်းဖြစ်ပြီး0ိညာဉ်ရေးရာကင်းမဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ထွင်းထုအတွက်, tသူလမ်းထိုအရာလက်ဆွဲထားသောပုံများကိုတင်းပလိတ်များအဖြစ်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်, ထို့နောက်အလှဆင်ရန်ဖြစ်သည်နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အသုံးပြုပါသေးငယ်တဲ့ rotary လက် tool ကိုနှင့်မြန်နှုန်းမြင့် Rotary Diamond ကြိတ်ခြင်းထွင်းရန်ခေါင်းကို။Jadeite ၏လက်ကိုထွင်းထုခြင်းသည်တရုတ်၏ရှေးဟောင်းလက်မှုပညာ၏ quintessence ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ပေးအပ်ထားသည့်ထွင်းထုခြင်း, ထို့ကြောင့်လက်ထွင်းထုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်ထူးခြားသောဝိညာဉ်ရေး, လက်ထွင်းထုထားသောကျောက်စိမ်း၏အားသာချက်များမှာထူးခြားမှုနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။သို့သော်အားနည်းချက်သည်အချိန်ကုန်ခြင်း, သုံးပြီးmini လက်ကြွေစက်သို့မဟုတ်အခြားအမျိုးမျိုးသော rotary ကိရိယာများအချိန်ဖြုန်းပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ကျောက်စိမ်းကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နည်းကိုစက်နဲ့ထွင်းထုထားတာကိုဘယ်လိုခွဲခြားရမလဲ, လက်ဖြင့်ထွင်းထုထားသလား။ စက်ဖြင့်ထွင်းထုထားသောကျောက်စိမ်း၏အစွန်းသည်မပါဘဲယူနီဖောင်းဖြစ်သည်radian;အပြီးသတ်ကျောက်စိမ်းသည်သဘာဝနှင့်တင်းကျပ်မှုကိုကြည့်ရှုလိမ့်မည်။ သို့သော်ကျောက်စိမ်းသည်လက်ဖြင့်ထွင်းထုထားသောအခွင့်အပြီးJade Rotary Toolပျော့ပျောင်းသောလိုင်းများနှင့်အတူပိုမိုနူးညံ့သိမ်မွေ့လိမ့်မည်။ ခြုံငုံကြည့်ထက်ပိုမိုသွက်လက်နှင့်သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်. သင်သည်အရေအတွက်နှင့်ထိရောက်မှုကိုလိုက်စားလျှင်, ထွင်းထုစက်သည်သင့်အတွက် ပို. သင့်တော်လိမ့်မည်။ သို့သော်လိုက်စားခြင်းသည်အနုပညာအလှအပနှင့်သဘာဝဖြစ်လျှင်, သင်တန်းနှင့်အတူလက်ထွင်းထုMini Electricထုခံကြိတ်စက်သင့်အတွက်ပိုမိုသင့်တော်သည်။Iအထူးသဖြင့်, tကျော်ကြားသောကျောက်စိမ်းထွေးရေကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့စုဆောင်းမှု၏အတွေ့အကြုံများစုဆောင်းခြင်းထိုကဲ့သို့သောလက်ျာလက်ကမ်းစာစောင်များရှိသည်.
သို့သော်သိပ္ပံပညာနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူစက်ထွင်းထုနည်းပညာသည်ပိုမိုအားကောင်းလာပြီးပိုမိုအားကောင်းလာသည်။ပုံသဏ္ into ာန်စွန်းထစ်ကို အသုံးပြု. 3D Printing ပေါ်လာပြီး 3D ထွင်းထုထားသည့် 3D Printing ကိုယခုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ စက်ဝိုင်းထွင်းထုခြင်းနည်းပညာသည် ပို. ရင့်ကျက်လာသည်။
Fသို့မဟုတ်စက်ထွင်းထု, လူအချို့ကကောင်းပါတယ်အဲဒါကိုမကြိုက်ဘူး,မည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုက develoPS အဆက်မပြတ်.ပြီးတော့ဈေးကွက်မှာပိုပြီးအလားတူထုတ်ကုန်တွေကိုတွေ့ရမယ်။ လုံးဝစကားပြော,အခြေခံအားဖြင့်ကောင်းသော jadeite ပစ္စည်းများသေတမ်းစာရေွးချယ် လက်ထွင်းထုဒါကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်လက်မှုပစ္စည်း အနုပညာပုံစံနှင့်အတူ.
သင်အချို့ရှာဖွေနေလျှင်Diy Jade GrinderMibond သည်သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါတို့မှာပါဝါကိရိယာအမျိုးမျိုးရှိတယ်Jade Rotary Tool, JADE MINI GRinder.
သေးငယ်တဲ့ rotary လက် tool ကို မြန်နှုန်းမြင့် Rotary Diamond ကြိတ်ခြင်း mini လက်ကြွေစက် အမျိုးမျိုးသော rotary ကိရိယာများ Jade Rotary Tool Mini Electric Carved Grinder Diy Jade Grinder တိကျသောထွေးဘို့ကြိတ်စက် Rotari Tool Carbid Burr လက်ရင့်စက်ပြင်